China Farm fefy ho an'ny omby, ondry, serfa, mpanamboatra soavaly ary mpamatsy | Pro Fefy
PRO.FENCE dia manamboatra fefy amin'ny toeram-pambolena amin'ny tariby vy vita amin'ny vy lehibe ary manamboatra azy miaraka amin'ny milina fanenomana mandeha ho azy. Ny tariby dia misy zinc mifono hatramin'ny 200g /㎡dia fantatra amin'ny alàlan'ny anticorrosion tsara sy ny tanjany avo koa. Ny fefy fambolenay dia nahatohitra ny toetr'andro ratsy ary nahatohitra biby mahery. Ny milina fanenomana izay ampiasaintsika ankehitriny dia afaka manamboatra karazana fatotra karazan-tenona isan-karazany ao anatin'izany ny Monarch Knot, Square Deal Knot, Cross Lock knot ary koa ny haavony hafa, savaivony tariby. Inona ny karazana knot sy ny famaritana ampiasaina izay miankina amin'ny habetsaky ny biby ilaina amin'ny fefy. PRO.Fence dia afaka manome anao vahaolana namboarina tanteraka mba hitazomana biby sy biby azo antoka isan-karazany.
Alohan'ny hisafidiananao fefy amin'ny toeram-piompiana dia tsy maintsy mandinika momba ny karazana biby fiompy tadiavinao ianao. Ity fampahalalana ity dia hamaritra fa ny fefy amin'ny fambolena dia mifanaraka amin'ny ilainao. Ny haben'ny biby sy ny toetra amam-pitondrany samy hafa dia mitaky fitakiana hafa momba ny haavony, ny savaivony tariby, ny karavasy Toy ny serfa dia entina amin'ny alàlan'ny raceway mba hanerena ny fefy, noho izany dia mila fefy mateza avo amin'ny fatotra lakroa ary elanelam-potoana 6inch. Fa ny omby amin'ny ankapobeny no biby mora fatorana, noho izany dia manoro hevitra ny karazan'antona tokana amin'ny fefy lehibe kokoa fa fefy avo kokoa. Zava-dehibe ny mahatakatra ireo fahasamihafana ireo izay hanampy anao hisafidy ny fencing amin'ny toeram-pambolena.
Savaivony tariby: 2.0-3.6mm
Harato: 100 * 100mm / 70 * 150mm
Sakany: 30 / 50metatra anaty horonana
Ity fefy amin'ny fiompiana ity dia an'ny fefy voatenona ary vita amin'ny tariby vy. Tonga izy io mba hanomezana fihenam-bidy avo lenta amin'ny fefy ary hanoherana ny hatairana avy amin'ny biby.
2) Anti-harafesina tsara
Ny tariby dia zahana amin'ny zinc mifono alohan'ny fanenomana. Ary ny zinc coating dia hatramin'ny 200g /㎡ handray anjara amin'ny fanoherana ny harafesina.
3) Mora apetraka
Ny fefy amin'ny fambolena dia tsotra amin'ny rafitra ary mora hapetraka. Mila mandroaka ny paositra amin'ny tany aloha izy avy eo, ary ahantòny ny harato tariby ary ataovy kodiarana amin'ny poste amin'ny alàlan'ny fampiasana tariby.
Ny firafitra tsotra ihany koa dia miaraka amin'ny fitaovana kely kokoa dia hanampy amin'ny fitsitsiana ny vidiny. Fonosina anaty horonan-taratasy izany dia hamonjy ny entan'ny fandefasana sy ny fitehirizana ihany koa.
Ny karazana voatenona dia mety hanampy ny fahalalahana amin'ny fefy ary hisorohana ny hatairana amin'ny biby.
Item TSY: PRO-07 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: Fefy boribory roa mifono vy mifamatotra harato fefy ho an'ny injeniera monisipaly
Manaraka: Fefy tariby nohamafisiny ho an'ny fambolena sy ny fampiharana indostrialy